Marc Ravalomanana, 26/05/2017. « Aza mifanindritsindry , « Tsy ampy traikefa ny fanjakana Rajaonarimampianina . | «Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Rtoa Voahangy Rajaonarimampianina sy ny karana (Filatex). Fanomezana !!!
« Sambatra aho fa Reny », Nitiah Nosy. « Reny », Irako Andriamahazosoa Ammi. →
Fanilikilihana ny Ben’ny tanàna Aza mifanindritsindry, hoy i Dada
Manana andraikitra ato amin’ny kaominina aho amin’ny maha mpanolotsain’ny Ben’ny tanàna ahy, hoy i Marc Ravalomanana ny alarobia lasa teo.
Tokony hahalala ny zava-misy marina sy mitranga eto ny Ben’ny tanàna. Fanambarana izay manameloka ny fanaovan’ny fitondrana foibe tsinontsinona ny kaominina tamin’ny fampiasana ny kianja mitafon’i Mahamasina sy ny zavatra nataon’ny HVM tao. Mila mifampidinika aloha ary mifanakalo hevitra fa tsy tonga dia manitsaka ny lalan’ny hafa fotsiny. Naheno aho ary nahita koa avy any Mahajanga fa manampy sy manome fanomezana an’ireo sahirana ny fanjakana. Tsy manakana ny Ben’ny tanàna fa anjarany ny miasa miaraka amin’ny fitondram-panjakana. Anjaran’ny fitondram-panjakana koa ny mifampidinika aminy fa tsy manao izay saim-pantany fotsiny, raha naravona ny fanambarany. Ny eran-tany dia mahafantatra fa tratran’ny kere ny vahoakantsika any amin’ny faritra Atsimo, koa maninona raha any amin’ny faritra Atsimo aloha no mandeha ianao dia mba homena fanomezana ireo olona sahirana ireo ? Raha ny any no mba mahazo ireny sobika iray ireny dia faly izy, hoy i Marc Ravalomanana.
Fa ianareo ihany koa anefa manontany anay hoe manaova raha mahavita dia ho hitantsika eo ary fa samy hanao izany. Ianareo fitondram-panjakana milaza hoe tena manao ny ara-dalàna izahay fa raha manara-dalàna tsy midika fa hanitsaka ny an’ny hafa. Raha mahafantatra ny asa sy ny andraikitry ny kaominina amin’ny fampandrosoana ianareo dia izy no akaiky ny vahoaka na eo amin’ny fandriampahalemana na eo amin’ny fanabeazana (EPP).
Aza miedinedina sy mientanentana sy mihevotrevotra fa samy mahay lalàna isika ! Samy manana mpanolontsaina mpanao lalàna koa !
Tena hampihatra marina ny demokrasia eto Madagasikara isika. Manana olona isika sady manana tanora, hoy i Marc Ravalomanana nandritra ny dinika politika nokarakarain’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana (PNUD) ary fiaraha-miasa aminy teny amin’ny Hotely Carlton omaly.
Nabaribariny kosa ny fitavozavozan’ny fanjakana ankehitriny, ka nilazany fa ireo solontenan-dry zareo avy amin’ny fitondrana dia olona afaka mamaly sy miteny mazava ny zava-misy hisian’ny demokrasia. Resaka be fotsiny ny hoe fipetrahan’ny demokrasia, ka izay no ilana ny dinika politika, hoy ny filoha teo aloha. Tsy nisalasala izy naneho ny heviny mikasika ny fihetsiky ny mpitondra ankehitriny izay tsikaritra fa tsy vonon-kihavana.
Nambarany fa misakana ny fifampiresahana tsy hisy ny fitondrana satria tsy mety miresaka fa mandany andro amin’ny fotoana tokony hiasana. Ny zavatra hitako dia tahotra sy tsy fahasahiana miseho sy miteny rehefa hiresaka sy hifanatrika no antony mahatonga ny fitondrana hanao izany. Naneho an-kolaka momba ny tsy fahaizan’ny mpitondra ankehitriny, izay tsy mahalala ny tokony hataony amin’ny fitantanana ny firenena, ka mbola mitsapatsapa sy tsy mahavaha ny olan’ny vahoaka mandrak’ankehitriny kanefa efa 3 taona nitondrana i Marc Ravalomanana.
Raha halalinina ny fanehoan-keviny dia tsy ampy traikefa ny fanjakana Rajaonarimampianina, ka tsara kokoa ho azy aloha ny miverina mianatra fa tsy milingilingy mitondra fanjakana, kanefa izao no nafitsony. Tsy hoe tsy manana fahavononana ny mpitondra fa ny politika dia tsy tongatonga ho azy fa mila ianarana satria izay ny maha siansa azy, hoy izy. Ilaina fantarina miainga any ifotony, any amin’ny kaominina sy ny vahoaka, ary mila mahalala tsara ny zava-misy. Mahay ny famahana olana ary mahavita sy manana fomba sy ny hoenti-manana manatontosa izany, hoy hatrany i Marc Ravalomanana.
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Carlton Marc Ravalomanana, CUA Antananarivo, Hery Rajaonarimampianina, Marc Ravalomanana, PNUD Madagascar. Ajoutez ce permalien à vos favoris.